“Real Madrid waxay u qalantay wax ka badan barbaro kulankii El Clásico” – Zidane – Gool FM
“Real Madrid waxay u qalantay wax ka badan barbaro kulankii El Clásico” – Zidane
(Madrid) 19 Dis 2019. Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka hadlay kulankii xiisaha badnaa ee El Clásico oo ay Barcelona kula soo galeen 0-0 garoonka Camp Nou.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa dhibcaha ku qeybsaday kulankii xiisaha badnaa ee El Clásico, kaddib markii ay ku kala baxeen barbaro 0-0 ah, xilli ciyaartan ay aheyd mid horey loo baajiyay ee ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Kaddib ciyaarta ayuu macalinka reer France ee Zinedine Zidane la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa inaan sameynay qaab ciyaareed naga dhigaya inaan u qalanay wax ka badan natiijada ay ciyaarta ku dhamaatay, laakiin tani waa kubadda cagta, waana inaan ku faraxsanaano waxa ay sameeyeen ciyaartoydeena”.
“Haa waan ognahay inuu yahay garoon adag ee aan kula ciyaarnay koox goolal dhalin karta daqiiqad kasta, laakiin waxaan ciyaarnay kulan weyn, kaliya waxaa inaga maqnaa inaan gool dhalino”.
“Waxaan awoodnay inaan guuleysano kulankan, waxaan qabaa inaan sidaas sameyn karnay”.
Intaas kaddib Zinedine Zidane ayaa su’aal laga weydiiyay arrinta ku saabsan suurtogalnimada ah in Real Madrid loo diiday laba rigoore kulankii xalay El Clásico wuxuuna yiri:
“Ma aanan arag rigoorada, laakiin waxay ii sheegeen wixii dhacay”.
Shirkii Jaraa’id ee uu maanta qaban lahaa Ljungberg oo dib loo dhigay & Xilliga ay Arsenal ku dhawaaqayso Macallinkeeda cusub ee Mikel Arteta oo la shaaciyey
Yaya Toure oo kaga digay Mikel Arteta inuu ogolaado shaqada tababarka ee kooxda Arsenal… (Maxay tahay sababta?)